I-loft ye-Merry Widow EAST - I-Airbnb
I-loft ye-Merry Widow EAST
Mobile, Alabama, i-United States
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Chris
U-Chris uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Ifulethi lethu likanokusho eliphezulu lisenkabeni yedolobha i-Mobile, AL. Itholakala ngenhla ngqo kwe-The Merry Widow (ibha & indawo yomculo), lesi sikhala sifanelekile kulabo abafuna ukunambitheka kwe-nightlife emnandi i-Downtown Mobile enganikezwa. Lesi sikhala akusona esawo wonke umuntu, njengoba ngobusuku bombukiso/emcimbi umculo ophansi udlala ngemuva kwesikhathi. *Le airbnb ihloselwe ukuhlala ubusuku bonke kuphela, Uma uthanda indawo yomcimbi/iphathi, sicela ucacise emlayezweni ukuze uthole amanani*
Itholakala ngenhla ngqo kwendawo yethu yokucima ukoma kanye nendawo yomculo i-Merry Widow, siyindawo ekahle emaphakathi ukuze ujabulele zonke izindawo ezinhle kakhulu zokuzijabulisa zedolobha.
Indawo ingeyesimanje, ihlanzekile, futhi ikhombisa umlando ocebile wezakhiwo leli dolobha elizowunikeza.
Jabulela ikhofi lasekuseni kuvulandi wethu wangasese obheke idolobha, noma wabelane ngokudla nabangani ekhishini lethu elikhulu ngaphambi kokuphumela ezindaweni eziningi zokucima ukoma, amapaki, namahholo ekhonsathi atholakala phakathi nebanga lokuhamba ngezinyawo.
Umbhede omkhulu ongu-1, 1 usofa
ubusuku obungu-7 e- Mobile
Jun 2, 2022 - Jun 9, 2022
4.79 out of 5 stars from 47 reviews
4.79 · 47 okushiwo abanye
Sitholakala enhliziyweni ye-Mobile's Downtown Entertainment District. Ezinye zezindawo zokudlela ezihamba phambili zedolobha, amabha, amapaki, izitolo zekhofi, iminyuziyamu, amasonto nezindawo zomlando zitholakala ebangeni lokuhamba ngezinyawo. Futhi sikuhambo lwemizuzu eyi-10 kuphela ukusuka emisebenzini eminingi etholakala ku-Mobile Bay okuhlanganisa i-USS Alabama Battleship Park, 5 Rivers Delta Nature Resource Center, kanye nezindawo zokudoba nezimakethe ezinkulu zokudla kwasolwandle.
**SICELA UQAPHELE** Njengoba le ndawo ephezulu itholakala ngaphezu kwendawo yokuphuzela utshwala, ngobusuku lapho umculo obukhoma wenza khona phansi, isikhala singase sibe phezulu kuze kube kusihlwa (imicimbi etholakala lapha: www.themerrywidow.net) . Njengoba usendaweni emaphakathi nedolobha, eduze nomfula uzophinde uzwe imisindo yethrafikhi ejwayelekile kanye nesitimela nemikhumbi emikhulu ngezikhathi ezithile. Izinsimbi zeCathedral (ezisendaweni eqhele ngamabhulokhi amabili) nazo zikhala njalo phakathi nosuku nangamaholidi.
Sincoma ukuthi uhlale lapha uma ungathanda ukuhlola idolobha futhi unganaki ukuphithizela kwempilo yedolobha.
Siyatholakala ngokuncane noma okuningi njengoba usidinga! Ababungazi abahlali endaweni. Izivakashi ziyazihlola zingena futhi ziphuma ngaphandle kokuxhumana nomsingathi ngaphandle kwalapho ziceliwe/kudingekile. Sifuna uzizwe ukhululekile ngangokunokwenzeka ngesikhathi sokuhlala kwakho. Siseduze uma udinga usizo phakathi namahora ajwayelekile ebhizinisi.
Siyatholakala ngokuncane noma okuningi njengoba usidinga! Ababungazi abahlali endaweni. Izivakashi ziyazihlola zingena futhi ziphuma ngaphandle kokuxhumana nomsingathi ngaphandle k…
Hlola ezinye izinketho ezise- Mobile namaphethelo